“ရွှေမြန်မာ”: February 2010
*တပေါင်းလသည် မြန်မာလတွေရဲ့ တစ်ဆယ့်နှစ်လမြောက်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တာရဲ့
နောက်ဆုံးလဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းကူးနွေစ သာယာလှတဲ့လဖြစ်ပြီး ရွက်ဟောင်းလေးတွေ
ကြွေကျနေခြင်းဟာ လူတွေကို လွမ်းဆွတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်
မတ်လမှာ ကျရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နေ့ပူလို့ ညချမ်း၊ တပေါင်းလဆန်းလို့လည်း
တပေါင်းလရဲ့ ရာသီပွဲတော်ဟာ သဲပုံစေတီပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ သဲတွေကို စုပုံ၍
စေတီအသွင်တည်ကာ သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားအား ရည်မှန်းပူဇော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သဲပုံစေတီပွဲတော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ဖြစ်သဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာစတင်ထွန်းကားလာချိန်မှာပင် ရှိခဲ့တဲ့
ပွဲတော်လို့လည်း ယူဆရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပေါင်းလသို့ ရောက်သည့်အခါ
မြစ်တွေ၊ ချောင်းတွေမှာ ရေစစ်ပြီး သဲခုံသောင်ခုံဖြူဖြူဖွေးဖွေးများ
ပေါ်ထွန်းလာလေ့ရှိပါတယ်။ တောင်သူဦးကြီးတို့လည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းများမှ
အနားယူချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုအရင်တုန်းကတော့ ရှေးမြန်မာမင်းတွေဟာ
ထိုသဲပုံစေတီပွဲကို ရာသီပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရွှေနန်းတော်ကြီးမှ
ကျေးလက်တောရွာများအထိ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ဆင်ယင်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သဲပုံစေတီပွဲတော်ဟာ ယခုခေတ်ကျတော့ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေပါပြီ။ မန္တလေးစတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း မြို့ရွာအနည်းငယ်မှာသာ ကျင်းပကြပါတော့တယ်။ ယခုတော့
သဲပုံစေတီပွဲတော်အစား စေတီပုထိုးများ၌ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်တွေကို
ကျင်းပကြပါတော့တယ်။ အဲဒီဘုရားပွဲတော်ကိုလည်း တပေါင်းပွဲလို့ ခေါ်ကြတယ်လေ။
မနက်ဖြန်ဟာဖြင့် တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာစုလေးဖြင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအား
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, February 26, 2010 No comments: Links to this post
Product Presentation List of Software & Solution Show - 2010 Feb
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, February 25, 2010 No comments: Links to this post
ထူးခြား ၉ ဌာနေ ရွှေတိဂုံမြေ
(၁) တ၀ဂူ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား (သို့) ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရား
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အထက်ပစ္စယံ အေ၇ှ့ ဘက်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုတ၀ဂူဘုရားသို့ အမျိုးသားများသာလျှင် တက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ရပြီး၊ အမျိုးသမီးများ မဖူးမြော်နိုင်သော ဘုရားဟုလည်း ဆိုလျှင် မှားမည်မဟုတ်ပေ။ တ၀ဂူ ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရားဟုလည်းခေါ်တွင်လေသည်။ဆုတောင်းပြည့် တ၀ဂူုဘုရားသည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည့်အတွက် ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု အလွန်ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေးအခါက မင်းညီမင်းသားများသည် တ၀ဂူ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကို တက်ပြီးဆုတောင်းဆုယူပြုလုပ်ကြသည်။ သစ္စာအဓိဌာန်ပြုလုပ်ကြသည်။ ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း အောင်မြင်ကြသည်။ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ပြီး နန်းရပ်ထီးဖြူလုယူကြသည်။ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ကြသည်။ သို့အတွက် အချင်းချင်းမသတ် ဖြတ်စေရန် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် မင်းလုပ်စေရန်အတွက် မင်းညီမင်းသားများ တ၀ဂူဆုတောင်းပြည့်ဘုရား မဖူးမြော်ရဟု ဘုရင်များက အမိန့်စာချွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရလေသည် ဟုမှတ်သားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် တ၀ဂူဘုရားကို လူတိုင်း အလွယ်တကူ မဖူးမြော်နိုင်စေရန် ဆုမတောင်းနိုင်ကြစေရန် တ၀ဂူဘုရားကို အထက်ပစ္စယံ လူသူအရောက်အပေါက်နည်း သော နေရာတွင်လျှို့ဝှက် တည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ပြောသမှတ်ပြုကြပါသည်။
ရွှေတိဂုံကုန်းတော် ရင်ပြင်တော် စနေထောင့်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ စေတီငယ်ပေါ်တွင် ဇော်ဂျီရုပ်များ ပြုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လောကီပညာရပ် အစီအမံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဘုရားဟု သိရှိရလေသည်။
ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် ရာဟုထောင့် သံတန်ဆောင်းကြီး နံဘေးတွင်တည်ရှိတသည်။ အချို့ က ဘားလးဘားဘုရားဟုခေါ် ကြသည်။ ရှင်စောပုစေတီဟုလည်းတွင်သည်။ ဘုရားအနီးတွင် စကားစိမ်း၊ စကားဝါစသော စကားပင်လေးပင်ရှိသည်။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရားမြောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်း (ရှင်မထီးတန်ဆောင်း) တွင်းရှိဘုရားဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀-ခန့်က ရှင်မထီးဆရာတော် တည်သွားသည့်ဟုပြောသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရား ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရား၏ တောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်းတွင်း ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။ ရှင်အဇ္ဖဂေါဏကား ဆိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ နွားမျက်လုံးတစ်ဖက် ရှိသော ကိုယ်တော်ဟု ထင်ရှားသည်။ အဂ္ဂိရပ်တန်ခိုးဖြင့် ပုဂံခေတ်က ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာအောင်စောင်မခဲ့သော ကိုယ်တော်ဟုလည်းေ၇ှးဟောင်းသမိုင်းစာပေတို့တွင် ဆို၏။ ဆရာတော်က ၄င်းတည်ခဲ့မှန်း လူများသိစေရန် မျက်လုံးတော်တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ်ထုလုပ်သွားကြောင်းအဆိုရှိသည်။ ထိုအာရုံခံတန်ဆောင်း ရာဟုထောင့် (၀ါ) အနောက်မြောက်ထောင့်ရှိ ရုပ်ပွါးတော်မှာ မျက်လုံးတော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ် အရွယ်ချင်းမတူအောင်ပြုလုပ်ထားလေသည်။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော ဆံတော်တွင်း တန်ဆောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဆံတောင်တွင်းတန်ဆောင်းမှာ ဒဂုံခင်ခင်လေး၏ ကောင်းမှုဖြစ်သော မဟာဗောဓိစေတီ၏ အနောက်ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီကို တည်စဉ်က ဆံတော်များဆေးကြောသည့် တွင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားကြလေသည်။
တန်ဆောင်းတွင်းရုပ်ပွားတော်အနောက်တွင် ယခင်နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က ဆံတော်တွင်းသို့ဆင်းရာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရှိသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဆံတော်တွင်းမှ ရေသည် ဧရာဝတီမြစ်ရေနှင့် တစ်ကြောတည်းဖြစ်သဖြင့် ဒီရေအတက်အကျရှိတိုင်း ဆံတော်တွင်းတွင်လည်း အတက်အကျရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဆံတော်တွင်း အုတ်ပြသာဒ်ကို ငုံပြီး ၁၈၇၉ ခုနှစ်က တန်ဆောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့လေသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့မုခ် အနီးရှိ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်းဘုရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဆောင်းအတွင်းရှိ ရုပ်ပွားတော်ကို ဘိုးဘိုးအောင်တည်ရစ်သည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်းအနောက်ဘက်တွင် ကျောချင်းကပ်လျှက်ရှိသည်ကား ဓမ္မစေတီ၏ ကောင်းမှုတောင်စေတီဖြစ်သည်။ ဓမ္မစေတီဘုရားရှေ့တွင် ခြင်္သေ့နှင့် ကျားရုပ်ရှိသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်အရှေ့မုခ် အာရုံခံတန်ဆောင်းအတွင်းတွင် ရှိ၏။ ကကုသန်ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။လိုဏ်အတွင်းရှိကကုသတ်ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်၏ လက်ယာဘက် လက်တော်မှာ အခြားဘုရားများ ထုစဉ်ကဲ့သို့ လက်မှောက်ခုံမဟုတ်ဘဲ လက်တော်ပက်လက်ထားပြီး ထုထားသဖြင့် လက်ပက်လက်ဘုရားဟုခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိလေသည်။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် အရှေ့မုခ်နှင့် အင်္ဂါထောင့်အကြားရှိစေတီတစ်ဆူ၏ တောင်ဘက်မုခ်အတွင်းရှိ ကြေးဆင်းတုတော်ဖြစ်သည်။ အလွန်အချိုးအစားကျနပြေပြစ်လှသည်။ နဖူးတော်တွင် မို့မောက်နေပြီး ပြဒါးရှင်လုံးဌာပနာထားသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိ၏။ ပြဒါးရှင်လုံးရှိသည် မရှိသည်ကား အသေအချာ မသိရသော်လည်း အဆိုပါကြေးဆင်းတုတော်မှာ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်ရှိ ဆင်းတုတော်များအနက် အလွန်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းလှသော ဆင်းတုတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖူး ဖူးသူတိုင်း ၀န်ခံရပေသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, February 22, 20102comments: Links to this post
စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းပြည့် မေတ္တာတရားတွေပေါ့ကွယ်…
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, February 20, 20102comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, February 20, 2010 1 comment: Links to this post
သင့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေက တော်တော်တိုးတက်မှုရှိနေပြီလား။
သင့်လို လုပ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုတွေ ကျင့်ကြံ ကြိုးစားရမလဲ။
သင့်ရဲ့ ကြိုးစားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်နည်းလောက်တော့ ပြောပြခဲ့ပါလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်လို ကြိုးစားမှုရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, February 17, 2010 1 comment: Links to this post
အကြောင်းအရာက: ဗဟုသုတ, မျှဝေခြင်း
Online ပေါ်မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများအား အကာအကွယ်ပေးရေး
Online ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် အချက် ၁၀ ချက် တွေ့ရှိထားပါတယ်။
၁။ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အီးမေးလ်အတွက် သီးခြား account ဖွင့်ထားပါ။
E-mail အသုံးပြုသူတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင် Account ကို အသုံးပြုပြီး ပေးပို့တာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာက တစ်ခါတလေ စောင့်ကြည့်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သီးခြား Account နဲ့ ကိုယ်ပို့ရင်တော့ အလုပ်ခွင်က e-mail server အသုံးပြုစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒါဆို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေဟာလည်း Server ထဲ ရောက်သွားစရာ အကြောင်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
၂။ Website တွင် တင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ပေါ်လစီများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
Website ဆိုတာ ကိုယ်က ဘယ်လိုကွန်ပျူတာမျိုး သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လိုဆော့ဝ်၀ဲမျိုး ဟာဒ့်ဝဲမျိုးတွေ သုံးနေသည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လိုင်းကိုသုံးနေသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်သိချင်တာတွေကို ကြည့်ချင်တိုင်း ကြည့်နိုင်ဖို့ စုဆောင်းသိုမှီးထားရာ နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Website တစ်ခုဟာ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေ မည်မျှပါဝင်သည်ဖြစ်စေ မိမိသိလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို စုံစမ်းရယူနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးဖြစ်ရန် လိုပါတယ်။ Website ကိုဝင်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ဝင်တဲ့ Website ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းအရာတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးထားနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ရင် အဲဒီ ဆိုက်မျိုးဟာ အလကားပါပဲ။ ဒါကြောင့် မသုံးခင်ကတည်းက အဲဒီဆိုက်မှာ တာဝန်ယူနေတဲ့ Operator ထံကို ဆိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးစွာ စုံစမ်းသင့်ပါတယ်။ E-mail နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လှမ်းပြီး ပုဂ္ဂလိက အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အရေးပေးမပေးဆိုတာကို စုံစမ်းပါ။
၃။ သင့်ကလေးတွေကို ပညာပေးပါ။
ကလေးတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သူစိမ်းတွေဆီ ပေးပို့ခြင်းဟာ မလုပ်သင့်ကြောင်း ပညာပေးပါ။ နာမည်၊ လိပ်စာနဲ့ အခြားအလျက်အလက်တွေကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံ ပေးပို့တော့မယ်ဆိုရင်လည်း လူကြီးတွေကို ဦးစွာ အသိပေးဖို့ ပြောပြပါ။
၄။ အင်တာနက်ကိုကြည့်ပြီးတိုင်း ရှင်းသင့်တာတွေကို ရှင်းထားပြီး Memory သက်သာအောင် လုပ်ထားပါ။
အင်တာနက်ကို ၀င်ပြီးတိုင်း မိမိစိတ်ကြိုက်သတင်းတွေနဲ့ ပုံတွေကို ကူးယူထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကူးယူထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကူးယူထားရင် နောက်ပိုင်းမှာ Site ကို ၀င်ရတာ ပိုပြီး လွယ်ကူစေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကူးထားတာဆိုရင်တော့ မှားနေပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မှတ်တမ်းဟာ ကျန်နေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် စုံစမ်းရရှိသွားနိုင်ပြီး လုံခြုံမှုမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင်း ကူးပြီးရင် လက်စဖျောက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
၅။ အွန်လိုင်းဝင်ခွင့်ပုံစံဟာ လုံခြုံမှုရှိမရှိ သေချာအောင်စုံစမ်းပါ။
အွန်လိုင်းပုံစံဆိုတာ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တွေမရှိဘဲ ရယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ အားနည်းချက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပုံစံတွေဟာလည်း အလွယ်တကူရယူနိုင်တာ ဖြစ်လို့ပါ။ ပုံစံတွေကို ဖြည့်ပြီးပို့မှ အင်တာနက်ကို ၀င်လို့ရမယ့် လူသစ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို ပေးပို့တော့မယ်ဆိုရင် icon ပုံလေးကို သတိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ icon လေးဟာ သော့ဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေရင် လုံခြုံမှုမရှိပါဘူး။ သော့ခတ်ထားတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေရင်တော့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိပါတယ်။ ဆေးမှတ်တမ်း၊ ဘဏ္ဍာ ရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတွေစတဲ့ အထူးဂရုပြုရမယ့် အချက်အလက်တွေကို Webpage မှာ မတင်ထားပါနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှု လုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူး။
၆။ Cookies လို့ ခေါ်တဲ့ မလိုအပ်တဲ့ Text file တွေကို လက်မခံပါနဲ့။
Cookies တွေဟာ သင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားဖို့ Website ကနေ ရောက်လာတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ဖိုင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်လောက် သူတို့ ဆိုက်ကို ရောက်သွားမိတာနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေ မဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေ သင့်အသုံးပြုသူရဲ့နာမည်၊ Password တွေ သုံးပြီး Cookies တွေကို ပေးပို့နေတတ်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ လွှတ်ထားတဲ့ သီးခြားပုဂ္ဂလိကလိုင်းတွေအနေနဲ့ Cookies တွေကို အကြောင်းအရာသစ်တွေ အမြဲပို့တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကြော်ငြာတွေကို အဓိကထားပြီး ပေးပို့တတ်တယ်။ Cookies တွေရဲ့ အပြစ်ကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ အချက်အလက်တွေကို အမြဲခြေရာခံလိုက်နိုင်တာကြောင့် မကြာမကြာ သတိထားပြီး ဖျက်ပစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၇။ ပေးပို့သူရဲ့အမည်နေရာမှာ အမည်မသိဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး အသုံးပြုပါ။
အမည်မသိဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးဟာ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတဲ့နေရာနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို များစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်လိုသူတွေအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးပေးရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ အီးမေလ်းနည်းပညာက ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း ပေးပို့မှုကို လက်ခံနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။ အမည်မသိပေးပို့သူဆိုတာ ကိုယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်အရ စီစဉ်ထားတဲ့ လိပ်စာဖြစ်ပြီး၊ ပေးပို့လို့ရတဲ့ အီးမေလ်းမျိုးဖြစ်တာကြောင့် အွန်လိုင်းမှာ သက်သေခံချက်မကျန်အောင် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၈။ အီးမေလ်းကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် သီးခြားအသုံးပြုပါ။
အီးမေလ်းဆိုတာ ထင်သလောက် မလုံခြုံဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ စွဲမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။ ဟတ်ကာတွေက အနံ့ခံ Tools တွေနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ဆီပေးပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်ပေးပို့ရာမှာ ပရိုဂရမ်အချို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Netscape Messenger နဲ့ Internet Explorer Outlook တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pretty Good Privacy (PGP) ကိုလည်း စီးပွားရေးအတွက် အသုံးပြုတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
၉။ အင်တာနက်ကို Browse လုပ်ရန်အတွက် အမည်မသိဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းမျိုးကို အသုံးပြုပါ။
Website address ကို ရိုက်ထည့်ပေးရတော့မယ်ဆိုရင် မှတ်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းပြီး log လုပ်ပေးထားမယ့် Website ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူရဲ့အချက်အလက်တွေကို ခြေရာခံလိုက်နိုင်တဲ့ Tools တွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမည်ကို အမှန်အတိုင်း မဖော်ပြပါနဲ့။
၁၀။ သာမန်အသုံးပြုမှုမျိုးကိုသာ အသုံးချလုပ်ဆောင်ပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ သာမန်မေးခွန်းလေးတွေက သင့်ကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, February 15, 20103comments: Links to this post
The Union Day
February 12 is the Union Day. On this day in 1947, the Union of (Burma) Myanmar was born. The birth-place was Pang-long (Pin Lone) in the Shan States. During February,aconference was held Pin Lone. Bogyoke Aung San, other Myanmar Leaders, and the leaders of all national races attended the Conference. They demanded (for) independence from the British rulers. They showed that they were all united in this one great desire. This great desire was to beafree nation. With this unity of aim, we had won our freedom. The Pin Lone Conference has become historical. The people of the whole Myanmar must remember this conference. The union spirit was born at this conference.
The Union Day isapublic holiday. On this day, all the national races of Myanmar hold celebrations. Stage shows of songs and dances are held in many towns and villages. The Union Day is an unforgettable day for all of us.
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, February 12, 2010 1 comment: Links to this post
မာသာထွီစာဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကြီးမားတဲ့ မိဘမဲ့ကျောင်းကြီးကို တည်ဆောက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လူအများ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့အရာကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် လေးစားအားကျ အတုယူသင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဝန်းကျင်မှာလည်း ဒီလိုလူမျိုးတွေ ရှိနေမှာပါ။ ကျွန်မလည်း မိဘမဲ့တွေ၊ အသက်ကြီးတဲ့ ဘိုးဘွားတွေ ပြီးတော့ အနာကြီးရောဂါသည်တွေ အားလုံးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီချင်ပါတယ်။
အင်း ခုပြောချင်တာကတော့ မာသာကြီး မရှိတော့တဲ့နောက်မှာ နောက်ဆုံး သူ့မှာ ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာဟာ ပန်းခြင်းတစ်ခုရယ်၊ သူ့ရဲ့ဝတ်စုံရယ်၊ ခုဖော်ပြမယ့် စကားသာလျှင် သူ့ဘ၀အတွက် ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့စာသားတွေကို လူငယ်တွေ ဖတ်ရှုမှတ်သားပြီး လိုက်နာနိုင်ဖို့ ယမင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ခုစာသားကို မြန်မာလို့ ဘာသာပြန်သူကတော့ သိက္ခာတော်ရ ဦးလှမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စာသားတွေကတော့...
အကျိုးအကြောင်းမရှိ၊ ယုတ္တိမဆန် မိမိကိုယ်ကို ဦးစားပေးသော လူများကို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်ပါ။
သင်က ကောင်းတာပြုလည်း သင့်ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချသောသူများအတွက် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာ ဆက်ပြုပါ။
သင်သည် အောင်မြင်သူအဖြစ် မိတ်ဆွေဆိုးများ၊ ရန်သူစစ်များအပေါ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့လျှင်
သင် ပြုသော ကောင်းသောအမှုများဟာ နက်ဖြန်မေ့လျော့ခဲ့လည်း
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာကို ဆက်ပြုပါ။
သင့်ရိုးသားမှု၊ ဖော်ရွေမှုက သင့်ကို ဆိုးကျိုးဖြစ်စေခဲ့ရင်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက်ရိုးသားပါ။ ဖော်ရွေပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ခဲ့သောအရာများ တစ်ညတည်းနှင့် ပြိုပျက်ခဲ့ရ လျှင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်တည်ဆောက်ပါ။
လိုအပ်ချက်ရှိ လူသားများအား သင်ကူညီမစ၍ သူတို့က သင့်ကို တိုက်ခိုက်နေရင်လည်း လူသားများကို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကူညီမစပါ။
သင့်ဆီမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးသော အရာကို လောကကြီးအားပေးလည်း၊ သင် သွားချင်းထိခိုက်ရိုက်ခတ်တိုင်အောင် ခံရသော်လည်း သင့်ဆီမှာရှိသော အကောင်းဆုံးကို လောကကြီးအား ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးအပ်လိုက်ပါ။ တဲ့
ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ စကားလေးတွေလည်းနော်။ လောကမှာ အသက်ရှင်နေသရွေ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရန်သူချစ်သူခင်သူ ဒါတွေဟာ တွေ့ကြုံ နေရမှာပါ။ တတ်နိုင်သရွေ့ ခွင့်လွှတ်သည်းခံလိုက်ပါလို့ ယမင်း ပြောချင် ပါတယ်။ ခဏတာတွေ့ကြတဲ့သူတွေ ရေစက်ရှိလို့ လာဆုံကြတာလေ သူသာ ငါသာတယ် စိတ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ အမြဲပူလောင်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်မှ မကြည့်ပါနဲ့ ကိုယ့်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေလေ ဒါတွေကို လိုက်ခံစားနေရရင် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ခံစားရတာကို ပြောတာပါ။ အမြဲစိတ်ရှုပ် ထွေးနေမယ်လေ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လည်း အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဖြစ်လာ တော့မလား မဖြစ်လာတော့ဘူးနော်။ လူတွေပဲ တစ်ခါတလေတော့လည်း ခံစားရတော့ပေါ့။ ဘယ့်နဲ့ပြောပါလိမ့်။ ကျွန်မဆို ပိုဆိုးသေးတယ်။ တစ်ခါ တလေကျရင် ကိုယ်က စေတနာနဲ့ ကူညီတဲ့အရာက ဝေဒနာဖြစ်ရတာတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်အတွက်မကြည့်ဘဲ ကူညီမိတာကို သူများ ပြောလည်းခံပေါ့လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဖြေသိမ့်ရတာပေါ့။ လူတွေကို မှန်လို ကြည့်လို့ ဆိုပေမယ့် မှန်ထဲမှာ မဲ့ပြလည်း တတ်နိုင်သမျှ ပြုံးပြမိတယ်။ ကျွန်မရဲ့စိတ်က သူများကို ကူညီရရင် ပျော်နေမိတာပဲ။ ကျွန်မတို့မိသားစုဟာ ခုချိန်ထိ စီးပွားရေးကို ပြေလည်တယ်ဆိုတာ မရှိသေးပေမဲ့ ကျွန်မ အားမလျော့ဘူး။ တစ်နေ့ ငါ့မိသားစုကို သူများထက်သာအောင် ထားနိုင်ရမယ်လို့ အမြဲ တွေးတယ်။ သူများ အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရင် ကျွန်မ အလုပ် သုံးခုလုပ်တယ်။ တစ်ခါတလေလည်း ကျွန်မမောင်အကြီးကို အားမရဘူး။ သူက ခု ပထမနှစ် တက်နေတယ်။ ကျွန်မတို့က မောင်နှမများတော့ ပိုပြီးကြိုးစားရတယ်လေ။ မောင်လေးကို တက္ကသိုလ်တက်တော့ သူများနဲ့ တန်းတူထားချင်လို့ အဝေးသင်တောင် မထားခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ လူငယ်စိတ်ပဲရှိသေးလို့လား မသိဘူး။ နားမလည်ဘူး။ ကျွန်မဖြစ်ချင်တာက လူငယ်ပီပီ ကြိုးစားစေချင်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာ သူတို့ကို ဖြစ်ထွန်းစေချင်တယ်။ ကျွန်မ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းပင်ပန်းလေ ဒါပေမဲ့ မောင်လေးက နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အချိန်တန် လက်ဝါးဖြန့် ပိုက်ဆံတောင်းလို့ရနေတဲ့ဘ၀ဆိုတော့ ဘာမှမသိတတ်ဘူး။ အားမရဘူး။ တစ်ခါတလေ ကျွန်မလေ မေမေက ဘာလို့ ငါ့ကို ယောက်ျားလေး ဖြစ်အောင် မမွေးခဲ့ရတာလည်းလို့ တွေးမိတယ်။ မောင်လေးတွေက ငယ်သေးတော့ အကုန်ကျောင်းတက်နေကြတာလေ။ ကဲ ကျွန်မအကြောင်းပြောနေလို့ စိတ်ညစ်သွားဦးမယ်။ မပြောတော့ဘူးနော်။ တတ်နိုင်သရွေ့ ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ အားလုံးနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေစွာ နေကြည့်ကြပါနော်။
ရွှေဂုဏ် ငွေဂုဏ် ရာထူးဂုဏ်သည်
သူက ငြူစူ မကြည့်ဖြူ၍
ရိုးဂုဏ် ဖြောင့်ဂုဏ် ယဉ်ကျေးဂုဏ်သည်
သူက ငြူစူ မကြည်ဖြူလည်း
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, February 05, 20102comments: Links to this post
ညအမှောင်မှာ ကီးဘုတ်ကို အလင်းပေးဖို့ရာ
အရင်ဆုံး အဖြူရောင် အလင်းအားကောင်းတဲ့ LEDs မီးသီး ၂ လုံးဝယ်ပါ။ နောက် ၀ါယာကြိုးနည်းနည်းရှာပါ။ ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ အပေါက်ဖောက်ဖို့ drill machine အငယ်စား၊
ခဲဂေါက်နဲ့ ခဲဂွေတွေ ရှာခဲ့ပါ။ နောက် ကီးဘုတ်အဟောင်းတစ်ခုရှာပါ။ ကီးဘုတ်ရှိပြီးသားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ကီးဘုတ်အဟောင်းထက်ရှာရလဲလို့ သိလိုကြပါမယ်။ လက်ရှိသုံးနေတဲ့
ကီးဘုတ်က အသစ် အကောင်းကြီးမလား။ ပျက်ရင် အာမခံသက်တမ်းလည်းရှိနေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အဟောင်းသုံးတော့ ပျက်လည်းကိစ္စမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့
ကီးဘုတ်အဟောင်းကို ကျောဘက်က ဝက်အူတွေ ဖြုတ်ပြီး အသာဖွင့်ပါ။ သတိတော့ထားရပါမယ်။ ကီးဘုတ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခွာလိုက်ရင် အထဲက ကီးခလုတ်မှာ
စပရင်အစားခံတဲ့ ပလတ်စတစ်လို အ၀ိုင်းပြားလေးတွေ လွင့်ထွက်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။ အဲဒီ ပလတ်စတစ်ပြားလေးတွေကို သူ့ကီးခလုတ်ခွက်မှာ အသာရှိနေအောင်
ဒီတော့ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကီးဘုတ်ညာဘက်ထိပ်မှာ မီးသီး ၂ လုံးကို ထွန်းထားမလို့ပါ။ အပြင်က လျှပ်စစ်အား မလိုဘဲ ကီးဘုတ်က
ပါဝါကိုပဲ သုံးမှာပါ။ ကီးဘုတ်တွေမှာ Scroll Lock ကီးခလုတ်ကို နှိပ်ရင် မီးလေးလင်းနေတာ တွေ့မှာပါ။ နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရင် မီးပိတ်သွားပါမယ်။ အဲဒီ Scroll lock ကီးကို ယနေ့အချိနျများမှာ မသုံးသလောက်ပါ။ အပိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Scroll Lock ကီးကို ရွေးချယ်တာပါ။ ကဲ ကီးဘုတ်ကို ခွာပြီးပါပြီ။ အဲဒီမှာ ဆားကစ်ဘုတ်ပြားလေး တစ်ချပ်သာ တွေ့ရပါတယ်။ ကီးဘုတ်ရဲ့ထောင့်မှာ ၀ါယာကြိုးတွေနဲ့ပါ။ ဒါနဲ့ Scroll Lock LED မီးသီးကို ရှာပြီး ဂဟေဂေါက်နဲ့ အသာအပူပေးတို့ပြီး ၀ါယာကြိုးနှစ်ကြိုးကို ဖြုတ်ပါတယ်။ ဆားကစ်ဘုတ်ပြားမှာ ဆက်ထားတဲ့ ၀ါယာကြိုးက နှစ်ချောင်းဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၀ါယာလေးချောင်းကို ဖြုတ်ပါတယ်။ ၀ါယာကြိုး အနေအထားတွေက ကီးဘုတ်ဆားကစ်ပေါ် မူတည်တပ်ထားတာဖြစ်လို့ ပုံသေပြောလို့မရပါ။ မျက်စိနဲ့အမြင်ပေါ်မှာ ကြည့်လုပ်ရတာပါ။
နောက် ကီးဘုတ်ညာဘက်ထိပ်ဆုံးထောင့်မှာ အပေါက်နှစ်ပေါက်ကို drill နဲ့ ဖောက်ပါတယ်။ ၀ါယာကြိုးအရှည်ကိုလည်း ကြည့်ရပါတယ်။ ၀ါယာကြိုးနှစ်ကြိုးစီ
ထွက်နိုင်လောက်တဲ့နေရာမှာပါ။ ပြီးတာနဲ့ ၀ါယာကြိုးအစတွေကို အပေါက်မှာ ထုတ်ထားပြီး မီးသီးတစ်လုံးစီမှာ ခဲဂဟေတို့ပါတယ်။ LEDs မီးသီးအပေါင်းအနုတ်ကိုတော့
သတိထားရပါတယ်။ LEDs မီးသီးနှစ်လုံး ဝါယာကြိုး ချိတ်ဆက်မှုကို စိတ်ချရပြီဆိုတာနဲ့ ကီးဘုတ်ကို ပြန်ပိတ်ပါတယ်။ အထဲက ပလတ်စတစ်တွေ သူ့ကီးခွက်နဲ့ သူ
အပြည့်ရှိသလားဆိုတာလည်း ပြန်စစ်ရပါတယ်။ ဝက်အူတွေနဲ့ ပိတ်ပြီး ကီးဘုတ်ကို ကွန်ပျူတာမှာ ပြောင်းတပ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပါ။ Scroll Lock ကီးခလုတ်ကို
တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ မီးသီးတွေ လင်းသွားပါပြီ။ မလိုချင်ရင် Scroll Lock ကီးကို တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရုံပါပဲ။
ဟဲဟဲ ကီးဘုတ်ကတော့ နည်းနည်း အကြည့်ရဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ့်ကီးဘုတ်ပဲ။ ညဘက်မှာ တခြားမီးအလင်းရောင် မသုံးဘဲ ကီးဘုတ်ကို
ref: computer journal ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၀
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, February 03, 2010 1 comment: Links to this post
အောင်မြင်သော အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ နည်းလမ်းများ
ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အိုင်တီပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်
တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ပထမဦးဆုံးမှန်ကန်တဲ့ အိုင်တီခေတ်အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းတွေအနေနဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အိုင်တီအလုပ်အကိုင်တွေအနေနဲ့ Professional Level, Mangement Level နဲ့
Executive Level ဆိုပြီး အဆင့် ၃ ဆင့် ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့
အခြေခံအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Professional Level အဆင့် အလုပ်အတွေ့အကြုံ
အရည်အချင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်တွေ အဆင့်ဆင့်ရရှိလာပြီဆိုမှ
အထက်အဆင့်တွေကို တက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Technical Level မှာ
Systems Analyst/Analyst Programmer
Web Developer/Multimedia Specialist
Network Technician/Network Administrator
Systems Technician/System Administrator
စသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ
အဲဒီလိုပဲ Management Level မှာ ကြည့်ရင်လည်း
ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းရပ်အသီးသီးမှာ တာဝန်ခံမန်နေဂျာများအဖြစ်
Executive Level လို့ ခေါ်တဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိအဆင့်များမှာတော့
Vice Persident (IT)
Vice Persident(Information Service)
Chief Information Officer-CIO
Chief Technical Officer-CTO
Chief Security Officer-CSO
စတဲ့ ရာထူးတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်ရာထူးများဖြစ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိ
အဆင့်ရာထူးများကို မထမ်းဆောင်မီ Technical အဆင့်မှာ သက်ဆိုင်ရာ
ကျွမ်းကျင်မှု လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီးမှ
အဆင့်မြင့်ရာထူးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် Software Development Line မှာ Junior programmer, Senior
Programmer, System Analyst, Project Manager စသဖြင့် တစ်ဆင့်ပြီး
တစ်ဆင့် တက်လှမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Network Professional Line အနေနဲ့ဆိုရင်
Network Technician, Network Engineer, Network System Manager, CTO
(Network and Security) စသဖြင့် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်မှာ
ဘယ်ကျွမ်းကျင်မှု လမ်းကြောင်းကိုပဲ ရွေးချယ်ရွေးချယ် Industry ready လို့
ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အသင့် ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ကိုတော့ ဦးစားပေးစဉ်းစားရမှာ
ဖြစ်ပြီး အလုပ်အတွေ့အကြုံ ကျွမ်းကျင်မှုများအပြင် အိုင်တီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
အရည်အချင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်တွေကို ရရှိနိုင်ဖို့
ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊
လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေမှာ ထိုက်တန်တဲ့ ရာထူးတွေကို ရရှိနိုင်မှာ
အိုင်တီဆိုင်ရာ အရည်အချင်းအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်တွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ Level
အသီးသီးအလိုက် မိမိရဲ့ လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ရယူလေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက်မှတ်တွေထဲမှာ ဒီပလိုမာနဲ့ ဒီဂရီလက်မှတ်တွေကတော့ Academic
Oriented ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
အဲဒီလက်မှတ်တွေရဖို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာ
အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ခန့် လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး Certificate Level ကတော့
၃ လ ဒါမှမဟုတ် ၆ လ စသဖြင့်ပေါ့လေ လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအပြင် Academic Orienrted မဖြစ်တဲ့ အိုင်တီစာမေးပွဲတွေကိုလည်း
ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုတာတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အခုပြည်တွင်းမှာဆိုရင် National Exam တွေဖြစ်တဲ့ MCPA နဲ့ ITPEC တွေကို
ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲတွေအနေနဲ့ဆိုရင် On
Line ကနေ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ Microsoft, CISCO နဲ့ Sun Java Exam
တွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု စာစစ်ဌာနတွေမှာ ဖြေဆိုနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ခလစာမြင့်မားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေမှာ အိုင်တီပညာရှင်အဆင့်နဲ့
၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ခုနပြောထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့
(1) Membership of Professional Bodies
ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အသင်းဝင်လျှောက်ထားခြင်း
(2) Office Procedure/HR Regulations
ရုံးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို နားလည်အောင်
(3) Knowledge of Business
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီး၏ သဘောတရားများကို နားလည်အောင် လေ့လာထားခြင်း
(4) Communication Skill
လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ထားခြင်း
(5) Social Networking
မိမိဘ၀တိုးတက်ရာကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ
(6) Global Outlook
မိမိဒေသတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာဗဟုသုတများ သိသင့်သည်များ ကြိုတင်လေ့လာထားခြင်း
(7) Role Model
မိမိဘ၀တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်မည့်
စံပြုထိုက်သူတစ်ဦးဦး သတ်မှတ်ထားခြင်း (ဥပမာ – ဘီဂိတ်လ်၊ အိုဘားမား)
ကြီးမားသော ဇွဲလုံ့လ၀ိရိယဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း
ပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မယ့် ကောင်းမွန်သော
အောင်မြင်တဲ့ အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာ အမှန်အကန်လို့
ပြောကြားခဲ့သူကတော့ MCF ရဲ့ ၁၀ နှစ်မြောက်ပွဲမှာ
ဦးငြိမ်းဦး(အတွင်းရေးမှူး-မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း) က
ပြောကြားတာ ဖြစ်ပြီး လူသားတိုင်း အိုင်တီပညာရှင်များ ဖြေစေဖို့
နောက် ကျွန်မရဲ့အမြင်ကတော့ ကျွမ်းကျင်ပြီး
မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ နောက်တစ်ချက်က
အရည်အချင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေအပြင် အဓိက တစ်ချက်က
ငွေကြေးတတ်နိုင်ထောက်ပံ့မှု၊ နောက် အချိန်ပေးနိုင်မှု ဒါတွေ ပြည့်စုံနေမှသာ
ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်မြင်မိပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဟောပြောချက်တွေကို ကျွန်မ သွားရောက်နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်
ခုချိန်ထိ ဘာမှဖြစ်မလာသေးတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါတောင်
ဟောပြောတဲ့ပွဲတိုင်း မတက်ရောက်နိုင်တာကိုလည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဟောပြောပွဲတွေမှာ ၀င်ကြေးဆိုတာ မကောက်ခံတဲ့အတွက်လည်း
ကျွန်မတို့လို ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့သူတွေအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ထိုက်ကြောင်း
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, February 01, 2010 1 comment: Links to this post
အကြောင်းအရာက: နည်းပညာ, ဗဟုသုတ
Product Presentation List of Software & Solution S...
Online ပေါ်မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများအား အကာအကွယ်ပေးရေး...
အောင်မြင်သော အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက်ဖြစ်လာ...